ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးအား H.E. Mr. Martin Bille Herman အဖွဲ့ နှင့် H.E Mr. Pier Giorgio Aliberti တို့က သီးခြားစီလာရောက်တွေ့ဆု
Join hands for stability, peace, and development in Rakhine
The report to the people by State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi delivered.
Union Minister Dr Win Myat Aye looks into local needs.
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးအား ဒိန်းမတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးမူဝါဒဆိုင်ရာဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Martin Bille Hermanအဖွဲ့ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီတလီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Pier Giorgio Alibertiတို့က သီးခြားစီလာရောက်တွေ့ဆုံ
(၉.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ နေပြည်တော်
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးအား ဒိန်းမတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Martin Bille Hermanဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့ နှင့် မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ အီတလီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Pier Giorgio Aliberti တို့က အဆိုပါဝန်ကြီးရုံး မေခလာခန်းမတွင် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် သီးခြားစီလာရောက် တွေ့ဆုံပါသည်။
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးမူဝါဒဆိုင်ရာဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Martin Bille Herman ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးကဏ္ဍတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဦးစားပေးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဆောင်ရွက်နေသော လူသားချင်းစာနာကူညီမှုလုပ်ငန်းများတိုးမြှင့်ရေးကိစ္စ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်များအား အကောင်အထည်ဖေါ်နေမှုများ၊ ရေတိုရေရှည်ဆောင်ရွက် ရမည့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများအား ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဝန်ကြီးဌာနမှ အဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာနာကူညီမှု၊ နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များ၊ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျတင်မြှောက်ထားသော အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့်ပြည်သူလူထုအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှုများ၊ Red Cross Movement, WFP, ASEAN နှင့်မိတ်ဖက်နိုင်ငံများမှလူသားချင်း စာနာမှုအကူအညီများထောက်ပံ့နေသည့်ကိစ္စများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အကြံပေးကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက် များအား လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်နေမှုများ၊ UEHRD ထူထောင်၍ပြည်သူများ၏ အင်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလူငယ်ထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် လူသားချင်းစာနာမှုအကူ အညီဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလုပ်ငန်းများ အရှိန် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နေသည့်ကိစ္စရပ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၏လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနက ရဲဝန်ထမ်းအင်အားတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရန်အတွက် မူဝါဒများချမှတ်၍ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပေးမည့် အစီအစဉ်နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။
ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအီတလီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Pier Giorgio Aliberti နှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသော အစိုးရ၏လုပ်ငန်း များအားသိရှပြီး အီတလီနိုင်ငံအနေဖြင့် ကူညီနိုင်မည့်နည်းလမ်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ အကူအညီများပေးနိုင်မည့် ကိစ္စရပ်များအား မေးမြန်းဆွေးနွေးပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ပြည်သူများ၏ အင်အား၊ မိတ်ဆွေအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ၏ စုပေါင်းအင်အားဖြင့် အကောင်အထည် ဖေါ်မည့် UEHRD ၏လုပ်ငန်းများ၊ မူဝါဒများလုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်၍ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ နိုင်ငံတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်လိုသူများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ် နိုင်ငံသဘောတူညီချက်များချမှတ်နိုင်ရန် ဆွေးနွေးနေသည့်ကိစ္စများ၊ ကျေးရွာနှင့်အဆောက်အဦများ စနစ်တကျပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် အကောင် အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စရပ်များ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေးအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စင်္ကာပူသံအမတ်ကြီးမှ လာရောက်တွေ့ဆုံ Wednesday, 21 February 2018
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စင်္ကာပူသံအမတ်ကြီး H.E Ms. Vanessa Chan က ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် အဆိုပါ၀န်ကြီးရုံး မေခလာခန်းမ၌ လာရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ခံရမည့်သူ၏ သက်သေခံကတ်ပြား (NV Card) ထုတ်ပေးရေးနှင့် (National ID) စနစ်အတွက် (Biometric) နည်းဖြင့် မှတ်တမ်း တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ။ Wednesday, 21 February 2018
ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအနက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် နိုင်ငံသား စိစစ်ခံရမည့်သူ၏သက်သေခံကတ်ပြား(NV Card) ထုတ်ပေးရေးလုပ်ငန်းအားယနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၀)ရက်တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ခံရမည့်သူ၏ သက်သေခံကတ်ပြား (NV Card) ထုတ်ပေးရေးနှင့် (National ID) စနစ်အတွက် (Biometric) နည်းဖြင့် မှတ်တမ်း တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ။ Monday, 19 February 2018
ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအနက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် နိုင်ငံသား စိစစ်ခံရမည့်သူ၏သက်သေခံကတ်ပြား(NV Card) ထုတ်ပေးရေးလုပ်ငန်းအားယနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉)ရက်တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ခံရမည့်သူ၏ သက်သေခံကတ်ပြား (NV Card) ထုတ်ပေးရေးနှင့် (National ID) စနစ်အတွက် (Biometric) နည်းဖြင့် မှတ်တမ်း တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ။ Thursday, 15 February 2018
ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအနက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် နိုင်ငံသား စိစစ်ခံရမည့်သူ၏သက်သေခံကတ်ပြား(NV Card) ထုတ်ပေးရေးလုပ်ငန်းအားယနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၅)ရက်တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူသို့ အစီရင်ခံစာ Tuesday, 13 February 2018
၁။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအရေးကိစ္စများသည်ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်ခုတည်း၏ အရေးကိစ္စမဟုတ်ဘဲ ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံး၏ အရေးကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် ပြည်ထောင်စု တစ်ခုလုံး တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအရေး ပါသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။
The Report to the People on the Progress of Implementation of the Recommendations on Rakhine State Tuesday, 13 February 2018